Madaxweynaha Ruushka oo ka badbaaday isku day dil - Caasimada Online
Home Warar Madaxweynaha Ruushka oo ka badbaaday isku day dil
Madaxweynaha Ruushka oo ka badbaaday isku day dil
Moscow (Caasimada Online) – Madaxa Sirdoonka Ciidamada Ukraine ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu laba bil kahor ka badbaaday isku day dil.
Isaga oo la hadlayey wargeyska Pravda ee Ukraine ayaa Jeneraal Kyrylo Budanov waxa uu sheegay inuu jiray isku day “aan guuleysan” oo ka dhan ahaa noloshada hogagamiyaha Kremlin-ka, markii uu billowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine.
“Waxaa jiray isku day lagu khaarajin lahaa Putin. Xitaa weerar ayaa lagu qaaday, waxaa weeraray wakiilo ku sugan Caucasus, muddo aan fogeyn. Tani waa akhbaar aan la shaacin,” ayuu yiri Jeneraal Kyrylo Budanov.
Waxa uu intaas ku daray “Wuxuu ahaa isku day aan guuleysan, balse xaqiiqdii wuu dhacay … waxay aheyd laba bil kahor. Waan ku celinayaa mar kale, Putin wuxuu ka badbaaday isku day dil.”
Caucasus waa gobol aad u ballaaran. Waxa uu ka kooban yahay qeybo ka mid ah dhulka Ruushka, oo ay ku jiraan North Ossetia-Alania iyo Chechnya iyo gobollo kale oo aan Ruushka ka tirsaneyn kana mid ah dalalka Georgia iyo Azerbaijan.
Sheegashadan weli ma aysan xaqiijin NATO ama sirdoonka Mareykanka.
Haddii xogtan ay sax noqoto, tani ma noqon doonto markii ugu horeysay ee Putin uu wajaho isku day noocan ah. Waxaa la ogyahay inay jiraan ugu yaraan laba isku day dil oo uu Putin horey wajahay, mid dhacay 2008 iyo mid dhacay 2012. Waxaa sidoo kale jiri kara kuwa kale oo aan laga war-hayn.
Warka ku saabsan isku dayga dil ayaa imanaya ayada oo dagaalka u dhaxeeya labada dal uu galay bishii saddexaad, ayada oo weli aysan muuqan wax guul la taaban karo ah oo Moscow ay ka gaartay colaadda.